Faahfaahin ka soo baxaysa dad lagu diley wadanka Maraykanka | Jowhar somali news leader
Home NEWS Faahfaahin ka soo baxaysa dad lagu diley wadanka Maraykanka
Faahfaahin ka soo baxaysa dad lagu diley wadanka Maraykanka
Illaa Siddeed qof oo u badnaa haween asal ahaan ka soo jeeday Asia ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday saddex goobood oo ku taal gobolka Georgia ee dalka Mareykanka sida ay xaqiijiyeen hey’adaha amniga ee gobolkaas.
Toogashadan ayaa imaaneysaa maalmo yar kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu cambaareeyay kororka dambiyada naceybka ah ee ka dhan ah dadka Americanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Asia.
Kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in kororka naceykan uu qeyb weyn ka qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump , maadaama uu si joogta ah cudurka Coronavirus ugu yeeri jiray China Virus.
Booliska ayaa sheegay in la qabtay Robert Aaron Long oo 21-jir ah oo ku eedeysan dilka dadkan, waxayna sheegeen in kasta oo aysan heyn xog ku saabsan ujeedada dilkan, hadana ay baari doonaan.
Previous articleMaxkamada ICJ oo sheegtay inay soo gabgabaynayso kiiska dacwada badda
Next articleAt the height of the third wave, the EU threatens to ban the export of Covid-19 vaccine to the UK